Famonoam-balala : tsy nojerena ny aty afovoan-tany | NewsMada
Famonoam-balala : tsy nojerena ny aty afovoan-tany
Saika mifantoka any amin’ny tapany atsimo sy atsimo andrefan’ny Nosy ny asan’ny sampandraharaha mpamono valala. Ahitana andiam-balala koa anefa aty afovoan-tany, indrindra any avaratry ny distrikan’Anjozorobe, mitohy hatrany andrefan’Ambatondrazaka.
Misahana ny famonoam-balala eto amintsika ny Sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena (FAO). Tsikaritra fa tsy ahazoana tatitra avy any amin’izy ireo ny faritra ahitana andiam-balala eto amintsika, ny aty amin’ny faritra avo, sy afovoan-tany toy ny any amin’ny Tandavanalan’Angavokely-Anjozorobe-Ambatondrazaka, ohatra, indrindra ny any amin’ny tapany avaratr’Anjozorobe. Raha ny tatitry ny mponina sy ny tompon’andraikitra ifotony, toy ny tao amin’ny kaominina Ambongamarina, distrika Anjozorobe, nahitana andiam-balala tombanana nanana velarana 20 ha ny faramparan’ny volana febroary teo. Raha ny tatitra tonga taty amin’ny tonian’ny gazety, kijeja vao foy ireo, avy amin’ny andiam-balala tamin’ny taon-dasa, ary nanorim-ponenana tao anaty ala sy ny manodidina. Hatreto, tsy nisy ny tatitra avy any amin’ny FAO, fa ny any amin’ny faritra Atsimo Andrefana, Menabe, Bongolava sy ny manodidina ihany no ahazoana tatitra tsy tapaka.
Tsy nahazoana tatitra na iray aza
Efa nisy ny fotoana nahitana andiam-balala taty an-dRenivohitra sy ny manodidina, raha tsy hiteny afa-tsy ny taona 2015 lasa teo. Voalaza fa avy any Vakinankaratra sy Bongolava izy ireny, ary nisy ny nianavaratra sy niatsinanana, nihazo an’Anjozorobe sy tany Alaotra. Amin’izao fotoam-pahavaratra izao, feno ny fepetra, hanatodizana sy mahafoy ny valala. Hiditra amin’ny vanim-potoana ririnina isika, ka tsy maintsy mitady toerana mafana ny andiam-balala. Anisan’ny toerana mando lava, nefa mafana ny any amin’ny tapany avaratr’Anjozorobe mitohy any Alaotra.
Vola an-tapitrisany dolara ny atokana hiadiana amin’ny valala, iantohan’ny FAO, saingy mahavariana ihany raha tsy misy mihitsy ny tatitra ataony na iray aza, mikasika izany. Sompitr’i Madagasikara anefa ity toerana voalaza ity!